Abwaan Cali Sugulle ‘Dun Carbeed’ - Hoygamaansada
Abwaan Cali Sugulle ‘Dun Carbeed’
Gabayada Abwaanka oo idil Abwaan Cali Sugulle ‘Dun Carbeed’
Af Qalaad Aqoontu Miyaa
Abaar iyo awdal baan ku jirnaa
Anbanoo omos iyo oomanaan ku egnee
Amakaag iyo yaab argagax
Aboowe mancaanoow hoow
Ii sheeg maxaa ku daran
Aboowe macaanoow hee
Waan adqeeysanahee ku aaway
Abaayo macaaneey hooy
Af Qalaad aqoonta miyaa?
Waa intuu qofba eebbe geshaa
Ayeey nala tahay anagee
Ma ogtahay dib looma abuura dadkee
Ma ogtahay aqoonta amaah la iskuma siiyee
Ma ogtahay aqoonta abaal la iskuma saartee
Ma ogtahay aqoonta miyaa la iibsan karaa?
Ma ogtahay aqoonta miyaa la so ergadaa?
Aduunyada waan ka oowdanahee
Aan ogaano halkeey ku aadan tahee
Waan isqeeysanhee ku aaway
Aboowe macaanoow hoow
Ii sheeg maxaa kuu daran
Abaayo macaaneey hooy?
Af Qalaad aqoonta miyaa ?
Ma ogtahay dib looma abuura dadkee.
Asaageen horumaraan arkayaa
Ileeys cadoo iftiimanayee
Aboowe mancaanoow hooy
Ogali oo waxbarashada waa ??
Af shisheeya ayaa adoon anahayee
Itaalkii baa la’is amaahinayaa
Iskeena ma uwada adgeenayeee ?
Abwaan Cali Sugulle ‘Dun Carbeed’ war dheeri ah